ရုံးတွင် မရှိကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားစာများ - Myanmar Network
ရုံးတွင် မရှိကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားစာများ
Posted by Soe Soe Win on May 14, 2015 at 11:21 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကဲ၊ အဲဒီတော့ ယနေ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်စဉ်မိသားစု အပန်းဖြေအားလပ်ရက် မတိုင်မီ ရုံးတွင် ရှိသော နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သည် ဆိုပါစို့။ ကျွန်ုပ်၏ ရှေ့တွင် မိသားစု၊ စာအုပ်ကောင်းအချို့နှင့်အတူ နှစ်ပတ်ကြာ ပင်လယ်ကမ်းခြေခရီးစဉ်က ရှိနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ကုမ္ပဏီသည်လည်း ကျွန်ုပ် နားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိနေပါသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အားလုံးကို အကြောင်းကြား ပြီးဖြစ်သည်။ ထပ်မံ၍ သတိပေးပြီးလည်းဖြစ်သည်။ အီးမေးလ် စာလက်ခံရာ (Inbox) တွင်လည်း အလုပ်ကြွေးကျန် ဘာမှမရှိသလောက် ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးလုပ်စရာအရာဟူ၍ ကျွန်ုပ်ရုံးတွင်မရှိကြောင်း Out of office message (အလိုအလျှောက် စာပြန်ပေးမည့် ပြန်စာမျိုး) ကို ရေးရန်သာ ရှိပါတော့သည်။
သင်၏ ရုံးတွင်မရှိကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားမှုသည် မှန်ကန်မှုရှိရန် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ ပထမဆုံးအနေနှင့် အီးမေးလ်ပို့မည့် သူများကို သင်သည် သူတို့၏ စာကို ချက်ချင်းအကြောင်းပြန်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ဆိုသည်ကို ၎င်းအကြောင်းကြားစာနှင့် သိစေမည် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအနေနှင့် အကယ်၍ သင်၏ရေးသားထားပုံ မှန်ကန်ပါက ၎င်းအချက်သည် လူတွေက သင့်ဆီကို ငါးမိနစ်ကြာတိုင်းတစ်ခါ ဖုန်းဆက်ခေါ်တော့မည်မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခုလောလောဆယ် ဆက်သွယ်မရရှိပါ ဟုပြောခြင်းနှင့် အမှန်တကယ် ရုံးတွင်မရှိခြင်းတို့ကြားတွင် ကွာခြားချက် ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းပြင် နောက်ဆုံးတွင် ကောင်းမွန်သော Out of office စာမျိုးသည် လူများကို အခြားမည်သည့်နေရာသို့ အကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်း မှန်ကန်သော ညွန်ကြားချက်များ ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် သင်၏ အားလပ်ရက်အနားယူခြင်းသည် သူတို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အဖုအထစ် ဖြစ်စေတော့မည် မဟုတ်ပါ။
ပြီးပြည်စုံမှုရှိသော ရုံးတွင်မရှိကြောင်းအကြောင်းပြန်စာရေးသားနိုင်ရန်အတွက် အသုံးဝင်စေမည့် အကြံပြုချက်များကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးပါမည်။
Hi Thank you for your e-mail. (ဟိုင်း(နှုတ်ဆက်) သင့် အီမေးလ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
အမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်မှုနှင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောဆိုပါ။ ဤအချက်သည် သူတို့ သင့်ကို လိုအပ်နေကြောင်း သင်သိရှိပါသည်၊ သင်မရှိနေခြင်းကြောင့် သင်သည် သူတို့ကို အဆင်မပြေမှု ဖြစ်စေပါတော့မည်ဟု စာလက်ခံသူအား အချက်ပြရာရောက်ပါသည်။
I am now out of the office on family vacation/ataconference/travelling to China, etc.
ကျွန်ုပ်သည် ယခု (မိသားစုအားလပ်ရက် ခရီးသွားနေ (သို့) ကွန်ဖရင့် အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် တက်ရောက်နေ (သို့) တရုတ်နိုင်ငံသို့ခရီးသွားနေ စသဖြင့်) သောကြောင့် ရုံးတွင် မရှိပါ။
သင် out of office ဖြစ်ရသည့် အကြာင်းရင်းကိုပေးပါ။ ဆက်စပ်မှုအကြောင်းအရာသည် အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် တစ်ဖက်လူအား သင်၏အခြေအနေကို နားလည်စေပါသည်။ အားလပ်ရက်ခရီးသွားနေခြင်းသည် နာရီ / ရက်အနည်းငယ် ဆက်သွယ်၍ မရခြင်းမျိုးသက်သက် နှင့် ခြားနားပြီး၊ သင့်အားဆက်သွယ်လာသော တစ်ဖက်လူကို ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးရာ ရောက်ပါသည်။
I will be out of the office on Monday 14 July, and will be back on Tuesday 29 July.
ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက် တနင်္လာနေ့တွင် ကျွန်ုပ် ရုံးတွင် ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဇူလိုင်လ (၂၉)ရက် အင်္ဂါနေ့တွင် ပြန်လည်ရောက်ပါမည်။
နေ့စွဲများ တိကျစွာ ဖော်ပြပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ဇူလိုင်(၂၈)ရက် တနင်္လာနေ့တွင် အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်မှ ပြန်လာပါမည်။ သို့သော် အလုပ်သို့ အင်္ဂါနေ့မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်။ ဘယ်အချိန်များသည် သင်တကယ် မရှိသည်ကို ရှင်းလင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် လူများကိုကူညီပေးပါ။
For assistance, please contact the following people…..
အကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆက်သွယ်ပါ……
သင်မရှိသောအချိန်တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်လွှဲထားသော သင်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အမည်စာရင်းကို တိကျစွာ စာရင်းပြုစုပေးထားပါ။ ၎င်းအပြင် အကယ်၍ သင်သည် နယ်ပယ်များစွာ ကိုင်တွယ်သူဖြစ်ပါက သင်လွှဲလိုက်သောလူများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်အလိုက် စာရင်းခွဲပေးထားပါက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ထိုအခါ ဆက်သွယ်သူများသည် မည်သည့်ကိစ္စအတွက် မည်သူ့ဆီသို့သွားရမည် ကို သိသွားကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အီးမေးလ် လိပ်စာများကိုသာ ထည့်သွင်းပေးထားလိုက်ပါသည်။ ဤသို့ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းသည် ပတ်သက်သူ အားလုံးအတွက် ပိုမို လုပ်ရကိုင်ရ လွယ်ကူစေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
However, if you need to contact me urgently, please SMS me on…..
သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်ဆီသို့ အရေးတကြီး ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါက …………သို့ကျေးဇူးပြု၍ SMS (စာတို) ပို့ပါရန်။
သင်အဝေးသို့ရောက်နေချိန်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင်အား လိုအပ်လာမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပါ။ ဤနေရာတွင် သင်သည် သင့်ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း ပြောနေပါသည်။ သို့သော် ဆက်သွယ်ရမည့် နည်းလမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်သည် တိတိကျကျ ရှိနေရမည်။ ကျွန်ုပ်သည် အီမေးလ်များ စစ်နေမည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏သမီးနှင့် တင်းနစ်ကစားနေသည် ဖြစ်သောကြောင့် တယ်လီဖုန်းကို မဖြေချင်ပါ။ ထို့ကြောင့် text message စာနှင့်သတင်းပေးပိုမှုသည် အသင့်လျှော်ဆုံး ပင်ဖြစ်သည်။ စာနှင့်အကြောင်းကြားခြင်းများသည် တုန့်ပြန်မှုအများဆုံးရသည့် ဆက်သွယ်ရေးပုံစံအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် ဆက်သွယ်နေသော နှစ်ဘက်စလုံးကို တိကျသော အကြောင်းကြားစာ တစ်ခု ချန်ထားစေနိုင်ပြီး၊ အကြောင်းပြန်နိုင်ရန် အချိန်လည်း ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Thanks again for your email – see you when I get back !
သင့်အီးမေးလ် အတွက် ကျေးဇူးနောက်ထပ် တင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် ပြန်ရောက်သောအခါ ပြန်တွေ့ကြပါစို့။
စာကို အဆုံးသတ်တတ်ရန် အမြဲတမ်း အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် ယဉ်ကျေးပြရုံသက်သက်သာ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် တစ်ဖက်လူအား သင်တကယ် ရုံးတွင်မရှိကြောင်း ထပ်မံသတိပေးသလို ဖြစ်သောကြောင့် ဤစာအဆုံးသတ်ပုံမှာ အရေးကြီးပါသည်။ ရက်ရှည်အားလပ်ရက် အနားယူနေကြောင်း သတင်းပေးပို့မှုသည် “ကျွန်ုပ် တစ်နေ့ကုန် အစည်းအဝေးခန်းထဲ ရောက်နေပါသည်” ဟု အလိုအလျှောက် ပြန်ဖြေပေးနေခြင်းမျိုးနှင့်မတူ၊ ခြားနားပါသည်။
လူအများသည် သူတို့၏ ရုံးတွင်မရှိကြောင်း အလိုအလျှာက် အကြောင်းကြား သတင်းပေးပို့စေရာတွင် မကြာခဏ အမှားများ ပြုလုပ်တတ်ကြပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းသည် တစ်ဖက်လူမှ မိမိအပေါ် မကောင်းသောထင်မြင်ချက်ရှိခြင်း ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အခြေခံကျသော စာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါ အမှားမျိုး ရှိခဲ့လျှင်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အခြေခံစာလုံးပေါင်းနှင့် သဒ္ဒါအမှားများမှာလည်း မကြာခဏ ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် out of office message အများစုသည် သင်ရုံးမှ ထွက်ခွာခါနီး အလောတကြီးဖြင့် နောက်ဆုံးအချိန်တွင် ရေးလေ့ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင် အနာဂတ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် သိမ်းဆည်းထားနိုင်မည့် ပုံစံချထားပြီးသား out of message message အချို့ကို အောက်တွင် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Thank you for your email. I’m currently out of the office and will return on ___.
သင်၏ အီးမေးလ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ယခု လောလောဆယ် ရုံးတွင်မရှိဘဲ ___ ရက်နေ့တွင် ပြန်လာပါမည်။
You have reached the mail box of ___. I am out of the office at the moment and will be back on ___. Please refer all urgent matters to ___ at the following address ___.
သင်သည် ___ ၏ email သို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။ ယခုလောလောဆယ်တွင် ကျွန်ပ်သည် ရုံးတွင်မရှိဘဲ ___ ရက်နေ့တွင်ပြန်ရောက်ပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအီးမေလ် ___ တွင်ရှိသော ___ သို့ အရေးကြီးကိစ္စအားလုံးကို မေးမြန်းဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။
Thank you for your email. I will be out of the office until ___. If you need urgent help please contact my assistant ___ on [telephone number] or email ___.
သင်၏ အီးမေးလ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ___ နေ့အထိ ရုံးတွင်မရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည် အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ___ (သို့) အီးမေးလ် ___ တွင်ရှိသော ကျွန်ုပ်၏လက်ထောက်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
Thank you for your message. I’m currently out of the office and only have intermittent accress to email. If the matter needs urgent attention please contact ___ on [telephone number] or email ___.
သင်၏ message အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ယခုလောလောဆယ် ရုံးတွင်မရှိဘဲ အီးမေလ်းနှင့်လည်း ခပ်ကျဲကျဲ အဆက်အသွယ်သာရှိပါသည်။ အကယ်၍ ကိစ္စသည်အရေးတကြီး ကိစ္စရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ___ အား ဖုန်းနံပါတ် ___ သို့မဟုတ် အီးမေးလ် ___ တွင်ဆက်သွယ်ပါ။
Thank you for your email. I'm currently out of the office and will be returning on ___. If the matter is urgent, please call me on my mobile on [telephone number]. Alternatively, please get in touch with ___ at the following email address ___.
သင်၏ အီးမေးလ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ယခုလောလောဆယ်တွင် ကျွန်ပ်သည် ရုံးတွင်မရှိဘဲ ___ ရက်နေ့တွင်ပြန်ရောက်ပါမည်။ အကယ်၍ ကိစ္စအရေးကြီးပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ပ်အား ကျွန်ပ်၏ မိုဘိုင်းနံပါတ် ___ တွင်ဆက်သွယ်ပါ။ နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနှင့် ___ နှင့် အောက်ပါ အီးမေးလ်လိပ်စာတွင် ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ပါ။
Thank you for your message. Our office is closed today, [date], due toanational holiday. I will be back in the office tomorrow and will reply to your email as soon as I can.
သင်၏သတင်းပေးပို့မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ပ်တို့၏ ရုံးခန်းသည် ယနေ့ ပိတ်ပါသည် [နေ့စွဲ]။ ကျွန်ပ်သည် မနက်ဖြန်ရုံးသို့ ပြန်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်၏အီးမေးလ်ကို ကျွန်ပ်တတ်နိုင်သလောက် အစောဆုံး အကြောင်းပြန်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး သတိပြုရမည်မှာ သင်ရုံးတွင် မရှိကြောင်း သတိပေးစာရေးပြီးပါက သင်သုံးနေသည့် အီးမေးလ် application တွင် ပါရှိသည့် function ကို ဖွင့်ထားခဲ့ရန်ဖြစ်ပြီး သင့်ကိုယ်သင် အီးမေးလ် တစ်စောင်ပို့၍ အဆင်ပြေမပြေစမ်းသပ်ကြည့်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
Linkedin.com မှ Steve Milton ၏ How to Write the Perfect Out of Office Message နှင့် Blog.harwardcommunications.com မှ Out of office messages တို့မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးများကို အောက်ပါ link များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကဲ၊ အဲဒီတော့ ယနသေ့ညျ ကြှနျုပျတို့၏ နှဈစဉျမိသားစု အပနျးဖွအေားလပျရကျ မတိုငျမီ ရုံးတှငျ ရှိသော နောကျဆုံးရကျဖွဈသညျ ဆိုပါစို့။ ကြှနျုပျ၏ ရှတှေ့ငျ မိသားစု၊ စာအုပျကောငျးအခြို့နှငျ့အတူ နှဈပတျကွာ ပငျလယျကမျးခွခေရီးစဉျက ရှိနပေါသညျ။
ကြှနျုပျ၏ ကုမ်ပဏီသညျလညျး ကြှနျုပျ နားမညျဖွဈကွောငျး သိနပေါသညျ။ လုပျဖျောကိုငျဘကျအားလုံးကို အကွောငျးကွား ပွီးဖွဈသညျ။ ထပျမံ၍ သတိပေးပွီးလညျးဖွဈသညျ။ အီးမေးလျ စာလကျခံရာ (Inbox) တှငျလညျး အလုပျကွှေးကနျြ ဘာမှမရှိသလောကျ ဖွဈနပေါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ နောကျဆုံးလုပျစရာအရာဟူ၍ ကြှနျုပျရုံးတှငျမရှိကွောငျး Out of office message (အလိုအလြှောကျ စာပွနျပေးမညျ့ ပွနျစာမြိုး) ကို ရေးရနျသာ ရှိပါတော့သညျ။
သငျ၏ ရုံးတှငျမရှိကွောငျးအသိပေးအကွောငျးကွားမှုသညျ မှနျကနျမှုရှိရနျ အလှနျ အရေးကွီးပါသညျ။ ပထမဆုံးအနနှေငျ့ အီးမေးလျပို့မညျ့ သူမြားကို သငျသညျ သူတို့၏ စာကို ခကျြခငျြးအကွောငျးပွနျပေးနိုငျမညျမဟုတျဆိုသညျကို ၎င်းငျးအကွောငျးကွားစာနှငျ့ သိစမေညျ ဖွဈသညျ။ ဒုတိယအနနှေငျ့ အကယျ၍ သငျ၏ရေးသားထားပုံ မှနျကနျပါက ၎င်းငျးအခကျြသညျ လူတှကေ သငျ့ဆီကို ငါးမိနဈကွာတိုငျးတဈခါ ဖုနျးဆကျချေါတော့မညျမဟုတျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော အခုလောလောဆယျ ဆကျသှယျမရရှိပါ ဟုပွောခွငျးနှငျ့ အမှနျတကယျ ရုံးတှငျမရှိခွငျးတို့ကွားတှငျ ကှာခွားခကျြ ရှိနသေောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးပွငျ နောကျဆုံးတှငျ ကောငျးမှနျသော Out of office စာမြိုးသညျ လူမြားကို အခွားမညျသညျ့နရောသို့ အကူအညီတောငျးခံနိုငျကွောငျး မှနျကနျသော ညှနျကွားခကျြမြား ပေးမညျဖွဈသောကွောငျ့ သငျ၏ အားလပျရကျအနားယူခွငျးသညျ သူတို့၏ လုပျငနျးစဉျမြားအတှကျ အဖုအထဈ ဖွဈစတေော့မညျ မဟုတျပါ။
ပွီးပွညျစုံမှုရှိသော ရုံးတှငျမရှိကွောငျးအကွောငျးပွနျစာရေးသားနိုငျရနျအတှကျ အသုံးဝငျစမေညျ့ အကွံပွုခကျြမြားကို ဤနရောတှငျ ဖျောပွပေးပါမညျ။
Hi Thank you for your e-mail. (ဟိုငျး(နှုတျဆကျ) သငျ့ အီမေးလျအတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။)
အမွဲတမျးနှုတျဆကျမှုနှငျ့ ကြေးဇူးတငျကွောငျး ပွောဆိုပါ။ ဤအခကျြသညျ သူတို့ သငျ့ကို လိုအပျနကွေောငျး သငျသိရှိပါသညျ၊ သငျမရှိနခွေငျးကွောငျ့ သငျသညျ သူတို့ကို အဆငျမပွမှေု ဖွဈစပေါတော့မညျဟု စာလကျခံသူအား အခကျြပွရာရောကျပါသညျ။
ကြှနျုပျသညျ ယခု (မိသားစုအားလပျရကျ ခရီးသှားနေ (သို့) ကှနျဖရငျ့ အစညျးအဝေးတဈခုတှငျ တကျရောကျနေ (သို့) တရုတျနိုငျငံသို့ခရီးသှားနေ စသဖွငျ့) သောကွောငျ့ ရုံးတှငျ မရှိပါ။
သငျ out of office ဖွဈရသညျ့ အကွာငျးရငျးကိုပေးပါ။ ဆကျစပျမှုအကွောငျးအရာသညျ အရေးကွီးပါသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ၎င်းငျးသညျ တဈဖကျလူအား သငျ၏အခွအေနကေို နားလညျစပေါသညျ။ အားလပျရကျခရီးသှားနခွေငျးသညျ နာရီ / ရကျအနညျးငယျ ဆကျသှယျ၍ မရခွငျးမြိုးသကျသကျ နှငျ့ ခွားနားပွီး၊ သငျ့အားဆကျသှယျလာသော တဈဖကျလူကို ဘာဆကျလုပျရမလဲ ဆုံးဖွတျရနျ ကူညီပေးရာ ရောကျပါသညျ။
ဇူလိုငျလ (၁၄) ရကျ တနင်ျလာနတှေ့ငျ ကြှနျုပျ ရုံးတှငျ ရှိလိမျ့မညျ မဟုတျပါ။ ဇူလိုငျလ (၂၉)ရကျ အင်ျဂါနတှေ့ငျ ပွနျလညျရောကျပါမညျ။
နစှေဲ့မြား တိကစြှာ ဖျောပွပါ။ ကြှနျုပျသညျ ဇူလိုငျ(၂၈)ရကျ တနင်ျလာနတှေ့ငျ အားလပျရကျခရီးစဉျမှ ပွနျလာပါမညျ။ သို့သျော အလုပျသို့ အင်ျဂါနမှေ့ ပွနျလညျရောကျရှိမညျ။ ဘယျအခြိနျမြားသညျ သငျတကယျ မရှိသညျကို ရှငျးလငျးအောငျ ပွုလုပျပေးခွငျးဖွငျ့ လူမြားကိုကူညီပေးပါ။
အကူအညီအတှကျ ကြေးဇူးပွု၍ အောကျပါပုဂ်ဂိုလျမြားကို ဆကျသှယျပါ……
သငျမရှိသောအခြိနျတှငျ လုပျပိုငျခှငျ့လှဲထားသော သငျ၏ လုပျဖျောကိုငျဖကျမြား၏ အမညျစာရငျးကို တိကစြှာ စာရငျးပွုစုပေးထားပါ။ ၎င်းငျးအပွငျ အကယျ၍ သငျသညျ နယျပယျမြားစှာ ကိုငျတှယျသူဖွဈပါက သငျလှဲလိုကျသောလူမြား၏ ကြှမျးကငျြမှုနယျပယျအလိုကျ စာရငျးခှဲပေးထားပါက ပိုမိုကောငျးမှနျပါသညျ။ ထိုအခါ ဆကျသှယျသူမြားသညျ မညျသညျ့ကိစ်စအတှကျ မညျသူ့ဆီသို့သှားရမညျ ကို သိသှားကွမညျ ဖွဈသညျ။ ကြှနျုပျဆိုလြှငျ ကြှနျုပျ၏လုပျဖျောကိုငျဖကျမြား၏ အီးမေးလျ လိပျစာမြားကိုသာ ထညျ့သှငျးပေးထားလိုကျပါသညျ။ ဤသို့ထညျ့ပေးလိုကျခွငျးသညျ ပတျသကျသူ အားလုံးအတှကျ ပိုမို လုပျရကိုငျရ လှယျကူစသေောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
သို့သျော အကယျ၍ သငျသညျ ကြှနျုပျဆီသို့ အရေးတကွီး ဆကျသှယျရနျလိုအပျပါက …………သို့ကြေးဇူးပွု၍ SMS (စာတို) ပို့ပါရနျ။
သငျအဝေးသို့ရောကျနခြေိနျတှငျ တဈစုံတဈယောကျက သငျအား လိုအပျလာမညျ ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဆကျသှယျရေးနညျးလမျးကို ထိနျးခြုပျလိုကျပါ။ ဤနရောတှငျ သငျသညျ သငျ့ထံ ဆကျသှယျနိုငျကွောငျး ပွောနပေါသညျ။ သို့သျော ဆကျသှယျရမညျ့ နညျးလမျးနှငျ့ပတျသကျ၍ သငျသညျ တိတိကကြ ရှိနရေမညျ။ ကြှနျုပျသညျ အီမေးလျမြား စဈနမေညျ မဟုတျပါ။ ကြှနျုပျ၏သမီးနှငျ့ တငျးနဈကစားနသေညျ ဖွဈသောကွောငျ့ တယျလီဖုနျးကို မဖွခေငျြပါ။ ထို့ကွောငျ့ text message စာနှငျ့သတငျးပေးပိုမှုသညျ အသငျ့လြှျောဆုံး ပငျဖွဈသညျ။ စာနှငျ့အကွောငျးကွားခွငျးမြားသညျ တုနျ့ပွနျမှုအမြားဆုံးရသညျ့ ဆကျသှယျရေးပုံစံအဖွဈ ဆကျလကျ ရပျတညျနဆေဲ ဖွဈပါသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ၎င်းငျးတို့သညျ ဆကျသှယျနသေော နှဈဘကျစလုံးကို တိကသြော အကွောငျးကွားစာ တဈခု ခနျြထားစနေိုငျပွီး၊ အကွောငျးပွနျနိုငျရနျ အခြိနျလညျး ပေးသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
သငျ့အီးမေးလျ အတှကျ ကြေးဇူးနောကျထပျ တငျပါသညျ။ ကြှနျုပျ ပွနျရောကျသောအခါ ပွနျတှကွေ့ပါစို့။
စာကို အဆုံးသတျတတျရနျ အမွဲတမျး အရေးကွီးပါသညျ။ ၎င်းငျးသညျ ယဉျကြေးပွရုံသကျသကျသာ မဟုတျပါ။ ၎င်းငျးကဲ့သို့ပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ သငျသညျ တဈဖကျလူအား သငျတကယျ ရုံးတှငျမရှိကွောငျး ထပျမံသတိပေးသလို ဖွဈသောကွောငျ့ ဤစာအဆုံးသတျပုံမှာ အရေးကွီးပါသညျ။ ရကျရှညျအားလပျရကျ အနားယူနကွေောငျး သတငျးပေးပို့မှုသညျ “ကြှနျုပျ တဈနကေု့နျ အစညျးအဝေးခနျးထဲ ရောကျနပေါသညျ” ဟု အလိုအလြှောကျ ပွနျဖွပေေးနခွေငျးမြိုးနှငျ့မတူ၊ ခွားနားပါသညျ။
လူအမြားသညျ သူတို့၏ ရုံးတှငျမရှိကွောငျး အလိုအလြှာကျ အကွောငျးကွား သတငျးပေးပို့စရောတှငျ မကွာခဏ အမှားမြား ပွုလုပျတတျကွပါသညျ။ ဤသို့ဖွဈခွငျးသညျ တဈဖကျလူမှ မိမိအပျေါ မကောငျးသောထငျမွငျခကျြရှိခွငျး ကို ဖွဈစနေိုငျပါသညျ။ အထူးသဖွငျ့ အခွခေံကသြော စာလုံးပေါငျးနှငျ့သဒ်ဒါ အမှားမြိုး ရှိခဲ့လြှငျဖွဈပါသညျ။ ယငျးကဲ့သို့ အခွခေံစာလုံးပေါငျးနှငျ့ သဒ်ဒါအမှားမြားမှာလညျး မကွာခဏ ဖွဈလရှေိ့ပါသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော out of office message အမြားစုသညျ သငျရုံးမှ ထှကျခှာခါနီး အလောတကွီးဖွငျ့ နောကျဆုံးအခြိနျတှငျ ရေးလရှေိ့သောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သငျ အနာဂတျတှငျ အသုံးပွုနိုငျရနျ သိမျးဆညျးထားနိုငျမညျ့ ပုံစံခထြားပွီးသား out of message message အခြို့ကို အောကျတှငျ ဖျောပွလိုကျပါသညျ။
သငျ၏ အီးမေးလျအတှကျ ကြေးဇူးတငျပါသညျ။ ကြှနျုပျသညျ ယခု လောလောဆယျ ရုံးတှငျမရှိဘဲ ___ ရကျနတှေ့ငျ ပွနျလာပါမညျ။
သငျသညျ ___ ၏ email သို့ ရောကျရှိနပေါသညျ။ ယခုလောလောဆယျတှငျ ကြှနျပျသညျ ရုံးတှငျမရှိဘဲ ___ ရကျနတှေ့ငျပွနျရောကျပါမညျ။ ကြေးဇူးပွု၍ အောကျပါအီးမလျေ ___ တှငျရှိသော ___ သို့ အရေးကွီးကိစ်စအားလုံးကို မေးမွနျးဆကျသှယျ အလုပျလုပျကိုငျနိုငျပါသညျ။
သငျ၏ အီးမေးလျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ။ ကြှနျုပျသညျ ___ နအေ့ထိ ရုံးတှငျမရှိပါ။ အကယျ၍ သငျသညျ အရေးပျေါအကူအညီလိုအပျပါက ကြေးဇူးပွု၍ တယျလီဖုနျးနံပါတျ ___ (သို့) အီးမေးလျ ___ တှငျရှိသော ကြှနျုပျ၏လကျထောကျထံသို့ ဆကျသှယျပါ။
သငျ၏ message အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါသညျ။ ကြှနျုပျသညျ ယခုလောလောဆယျ ရုံးတှငျမရှိဘဲ အီးမလျေးနှငျ့လညျး ခပျကြဲကြဲ အဆကျအသှယျသာရှိပါသညျ။ အကယျ၍ ကိစ်စသညျအရေးတကွီး ကိစ်စရှိပါက ကြေးဇူးပွု၍ ___ အား ဖုနျးနံပါတျ ___ သို့မဟုတျ အီးမေးလျ ___ တှငျဆကျသှယျပါ။
သငျ၏ အီးမေးလျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ။ ယခုလောလောဆယျတှငျ ကြှနျပျသညျ ရုံးတှငျမရှိဘဲ ___ ရကျနတှေ့ငျပွနျရောကျပါမညျ။ အကယျ၍ ကိစ်စအရေးကွီးပါက ကြေးဇူးပွု၍ ကြှနျပျအား ကြှနျပျ၏ မိုဘိုငျးနံပါတျ ___ တှငျဆကျသှယျပါ။ နညျးလမျးတဈခုအနနှေငျ့ ___ နှငျ့ အောကျပါ အီးမေးလျလိပျစာတှငျ ဆကျသှယျမှုပွုလုပျပါ။
သငျ၏သတငျးပေးပို့မှုအတှကျ ကြေးဇူးတငျပါသညျ။ အစိုးရရုံးပိတျရကျ ဖွဈသောကွောငျ့ ကြှနျပျတို့၏ ရုံးခနျးသညျ ယနေ့ ပိတျပါသညျ [နစှေဲ့]။ ကြှနျပျသညျ မနကျဖွနျရုံးသို့ ပွနျရောကျမညျဖွဈပွီး၊ သငျ၏အီးမေးလျကို ကြှနျပျတတျနိုငျသလောကျ အစောဆုံး အကွောငျးပွနျပေးမညျဖွဈပါသညျ။
နောကျဆုံး သတိပွုရမညျမှာ သငျရုံးတှငျ မရှိကွောငျး သတိပေးစာရေးပွီးပါက သငျသုံးနသေညျ့ အီးမေးလျ application တှငျ ပါရှိသညျ့ function ကို ဖှငျ့ထားခဲ့ရနျဖွဈပွီး သငျ့ကိုယျသငျ အီးမေးလျ တဈစောငျပို့၍ အဆငျပွမေပွစေမျးသပျကွညျ့ရနျ ဖွဈပါသညျ။
Linkedin.com မှ Steve Milton ၏ How to Write the Perfect Out of Office Message နှငျ့ Blog.harwardcommunications.com မှ Out of office messages တို့မှ ကိုးကားဘာသာပွနျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
မူရငျးဆောငျးပါးမြားကို အောကျပါ link မြားတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။
Permalink Reply by winkokothu on May 15, 2015 at 7:44
Permalink Reply by myinthlaing on May 16, 2015 at 11:51
Thanks you for your lecture
Permalink Reply by Aung Thet Khaing on May 19, 2015 at 18:22